Downtown efulethini ngqo enyuvesi / castle
Ngizizwe ngisekhaya efulethini lami elithokomele. Itholakala enkabeni yedolobha. Ungahamba ngezinyawo uye enqabeni, inyuvesi, esiteshini sesitimela, umbhoshongo wamanzi, ingadi yamarose, iminyuziyamu, ithiyetha kazwelonke, izindawo zokudlela nezitolo. Kungamamitha angama-70 nje ukuya enyuvesi / enqabeni. IParadeplatz, indawo emaphakathi kakhulu enkabeni yedolobha, iqhele ngamamitha angama-350. Kungamamitha angu-800 ukuya esiteshini sesitimela.
Ifulethi linombhede, usofa umbhede, iWiFi, okomisa izinwele, i-smart TV, iNetflix, umshini wekhofi weNespresso.
Leli fulethi libonakala ngaphezu kwakho konke ngendawo yalo. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuphumula ngemva komsebenzi onzima wosuku noma ngemva kohambo olude lokubuka indawo eMannheim - usufike endaweni efanele.
Igumbi lokuhlala likumema ukuthi uzenze ukhululeke futhi uphumule. Lapha ungabuka uchungechunge lwakho oluthandayo ku-Smart TV nge-Netflix (mahhala). Yiqiniso, une-WiFi kuwo wonke amagumbi efulethi. Umbhede omusha futhi ngaphezu kwakho konke othokomele kakhulu onombhede omusha welineni ulindelwe efulethini lami. Umbhede we-armchair ungaguqulwa ube umatilasi othokomele womuntu wesithathu. Igumbi linefasitela ngakho-ke liyakhanya, Yebo, ungaphinda wenze igumbi libe mnyama ukuze uphumule ungaphazanyiswa.
Ikhishi elincane lihlome ngokuphelele. Lapha uzothola ifriji elinendawo yesiqandisi, isitofu, itoaster, umshini wekhofi weNespresso neketela. Ikhofi, itiye kanye nosawoti, pepper kanye namafutha nakho kuyatholakala kuwe. Ungathola namapani namabhodwe ekhabetheni. Konke okudingayo ukuze uzinakekele lapha.
Indlu yokugezela ineshawa futhi ifakwe okomisa izinwele, amathawula amasha, ijeli yokugeza, ishampoo kanye nomuthi wokuxubha.
Ifulethi lisesitezi sokuqala. Ungasebenzisa izitebhisi noma uthathe ikheshi.
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nami uma unemibuzo. Ngibheke ngabomvu ukukwazi :)
Uhlala endaweni enhle kakhulu eduze kwenqaba. Ukusuka lapha ungahamba uye kuyo yonke into. Kungakhathaliseki ukuthi isiteshi sesitimela esikhulu, inqaba, inyuvesi noma imayela lokuthenga - yonke into isendaweni eseduze.
Ngisesandleni sakho uma unemibuzo.